Supermap - ihe siri ike 2D na 3D GIS ngwọta - Geofumadas
Eprel, 2019 Geospatial - GIS, mbụ echiche
Supermap GIS bụ onye na-eweta ọrụ GIS dị ogologo nke nwere ndekọ egwu kemgbe ọ malitere na ọtụtụ ngwọta na ọnọdụ geospatial. E guzobere ya na 1997, site na otu ndị ọkachamara na ndị nyocha na nkwado nke Academylọ Akwụkwọ Ọzụzụ Ndị China, ntọala nke arụmọrụ dị na Beijing-China, a pụkwara ịsị na uto ya na-aga n'ihu na Asia, mana Kemgbe afọ 2015, ọ nweela ọmarịcha mmụba nke mmụba n'ihi ihe ọgbara ọhụrụ ya na ọtụtụ teknụzụ GIS, GIS n'igwe ojii, ọgbọ 3D GIS na-esote ya na onye ahịa GIS.
N'ụlọ ntu ya na FIG izu na Hanoi, anyị nwere oge ikwu maka ihe dị iche iche sọftụwia a na-eme, amabeghị ọtụtụ mpaghara ọdịda anyanwụ. Mgbe mụ na ya mere mkparịta ụka ugboro ugboro, ekpebiri m ide edemede banyere ihe kacha masị m banyere Supermap GIS.
SuperMap GIS, gunyere ọtụtụ teknụzụ ndị dị mkpa -nhazi- nke gunyere nhazi data na njikwa oru nke geospatial. Kemgbe 2017, ndị ọrụ enweela ike ịnụ ụtọ mmelite ya, Supermap GIS 8C, agbanyeghị, 2019 SuperMap 9D a tọhapụrụ ọha na eze, nke nwere usoro teknụzụ anọ: GIS na igwe ojii, ọtụtụ GIS, 3D GIS na BigData. OWU.
Iji ghọtakwuo ihe kpatara eji ele ya anya dị ka ihe ngwọta dị mkpa, ị ghaghị ịmara otú e si agụpụta ngwaahịa gị, ya bụ, ihe ọ bụla n'ime ha na-enye.
Multilatform GIS, bụ ya: iDesktop, GIS Component, na GIS Mobile. Nke mbụ nke iDesktop ahụ e kwuru n'elu, mepụtara dabere na nkwụnye ins -zuru ezu-, ọ na-adaba na CPU dị iche iche, dị ka ARM, IBM Power ma ọ bụ x86, ma rụọ ọrụ nke ọma na gburugburu ebe ọ bụla arụ ọrụ, ma ọ bụ Windows, Linux ma jikọta ọrụ 2D na 3D.
Typedị onye ọrụ ọ bụla, onye ọ bụla, azụmahịa ma ọ bụ gọọmentị, nwere ike iji ngwa desktọọpụ a, ebe ọ bụ na ọ dị mfe iji ma kee ya n'ụdị ngwa Microsoft Office. N'ime ngwa a, ị ga-ahụ ngwaọrụ niile enwere ike ịhụ na GIS desktọọpụ ọ bụla maka ntinye data na ngosipụta, ihe owuwu ụlọ ọrụ, ma ọ bụ usoro nyocha, nke agbakwunyere ohere ịnweta ọrụ map weebụ, na-akwalite mmekorita n'etiti ndị ọrụ. N'etiti njirimara ọrụ ya, ihe ndị a pụtara: njikwa na nhụcha nke foto fotommetric, BIM, na igwe ojii.
N'ihe banyere GISMobile, ọ nwere ike ịrụ ọrụ na gburugburu iOS ma ọ bụ gam akporo, enwere ike iji ha na-anọghị n'ịntanetị maka data 2D na 3D. Ngwa ndị Supermap Mobile na-enye (SuperMap Flex Mobile na Supermap iMobile), gụnyere nyocha nke ubi, ọrụ ugbo, ụgbọ njem nwere ọgụgụ isi ma ọ bụ nyocha nke akụrụngwa, ụfọdụ n'ime ndị a nwere ike ịhazi ndị ọrụ.
GIS na igwe ojii
Otu n'ime usoro a na-apụghị izere ezere na nke a na-apụghị ịgbagha agbagha maka njikwa data na njikwa ụwa. Ọ bụ ikpo okwu jikọọ na ọtụtụ GIS ọnụ ka onye ọrụ / onye ahịa nwee ike iru ngwaahịa na ụzọ dị mma ma kwụsie ike. Ọ bụ SuperMap iServer, SuperMap iManager na SuperMap iPortal, nke edepụtara n’okpuru.
iServer SuperMap: Ọ bụ a elu-arụmọrụ n'elu ikpo okwu na nke i nwere ike igosi na-eme otú ahụ dị ka nlekọta na nkụzị nke 2D na 3D ọrụ, na mgbakwunye na-enye ihe onwunwe ịzụlite extensions. SuperMap iServer na, ị nwere ike ịnweta data ọrụ catalogs, data anya na ozugbo ma ọ bụ na-ewu Big Data ngwa.
SuperMap iPortal: oghere arụmọrụ maka nchịkwa nke òkè GIS - ọchụchọ na ibudata-, ndebanye aha, nchịkwa ọnụọgụ ọtụtụ, ntinye nkà na ụzụ maka ịmepụta map weebụ.
Super iPxpress Supermap: A na-ewu ya iji melite ahụmịghe ohere nke ndị ọrụ gaa na ikpo okwu, site na ọrụ nnọchiteanya na ntaneti mmepe teknụzụ. Site na iExpress ọ ga-ekwe omume ịmepụta ego dị ala, ọtụtụ usoro-usoro WebGIS. Tụkwasị na nke ahụ, ọ na-enye ohere ngwa ngwa mbipụta ngwaahịa, dịka 2D na 3D mosaics.
SuperMap iManager: eji maka nlekọta na nhazi nke ọrụ, ngwa na nnukwu mpịakọta data. Ọ na - akwado ngwọta Docker - teknụzụ akụrụngwa - iji rụpụta nke ọma GIS na ígwé ojii, na ihe okike nke Big Data, nke a na - enye ohere dị elu na obere ihe oriri. Ọ na-eme ka ọtụtụ nhazi dị na ígwé ojii, ma site na njirimara nlekota oru bara uru.
SuperMap iDataInsight: na-enye ohere ohere nke data geospatial, site na kọmputa - mpaghara - yana na weebụ, na-eme ka o doo anya na onye ọrụ ahụ nwere ike iji anya nke ngosi nke data ahụ, maka nhichapụ ya. Ọ nwere nkwado maka ịdebanye data na mpempe akwụkwọ, ọrụ weebụ na igwe ojii, ndị ọgaranya.
SuperMap Online: Ngwaahịa a na-eme ihe dị mma maka ọtụtụ, ịgbazite na nnabata data GIS na ntanetị. SuperMap Online na-enye onye ọrụ GIS nnabata na igwe ojii ka ha wee nwee ike iru sava GIS ọha na eze, ebe ha nwere ike ịnabata, wuo ma kesaa data gbasara ohere. SuperMap Online, yiri ihe ArcGIS Online na-enye, arụmọrụ na-agbakọta ebe ahụ dị ka: usoro nyocha (nkwụsịtụ, ntụgharị okwu, mmịpụta ozi, nhazi ntụgharị ma ọ bụ usoro ụzọ na igodo ụzọ), ntinye data 3D, mbipụta na ụzọ nkekọrịta data ntanetị, ọtụtụ SDK maka ndị ahịa, ịnweta data thematic.
Ngwa SuperMap ejirila 2D na 3D njikwa data, yana arụmọrụ ya na ngwaọrụ ọ ga - ekwe omume: Ntuziaka BIM, njikwa nke data fotommetric oblique, ịme ngosipụta nke data sitere na igwe nyocha laser (igwe ojii), iji ihe eji eme ihe ma ọ bụ 2D raster nke agbakwunye data dị elu na ederede iji mepụta ihe 3D.
SuperMap, agbaala mbọ maka ịhazi data 3D, yana nke a enwere ike ijikọ ma gbakwunye teknụzụ dịka: ezigbo eziokwu (VR), WebGL, eziokwu dịwanye elu (AR) na mbipụta 3D. Na-akwado data vector (isi, polygon, akara) yana ụlọ ọrụ ederede (nkọwa CAD), gụọ data REVIT na Bentley, ụdị ntanetị dijitalụ, na data GRID; Site na nke ị nwere ike iwepụta data owuwu maka meshes ederede, arụmọrụ yana rasta voxel, na-akwado maka ịkọwapụta akụkụ ma ọ bụ tinye mmetụta na ihe.
Ụfọdụ n'ime ngwa ndị dị na 3D SuperMap gburugburu bụ:
Ojiji nke nhazi atụmatụ: na-ewu atụmatụ ime atụmatụ site na ịmepụta ntụgharị ntụgharị dị ike nke ebe dị elu na ìhè ọkụ nke ihe ndị dị adị n'ezie.
Atụmatụ atụmatụ gbasara mbara igwe: dika mpaghara na àgwà nke ụdị 3D, usoro ahụ na-emepụta ihe ndị dịka ụzọ.
Nyocha 3D: enwere ike ịlele ihe onwunwe na ezigbo ụlọ, iji chọpụta ọnọdụ ha na ịmepụta atụmatụ nchebe.
Site na teknụzụ SuperMap, nyocha anya, nchekwa, nhazi data, nyocha gbasara mbara igwe na usoro nnyefe data nwere ike ịme n'oge, nke a bụ ihe ọhụụ n'ọhịa nke GIS + Big Data. Ọ na-enye SuperMap iObjects for Spark, a GIS development platform, nke na-enye onye ọrụ ikike GIS dị mkpa maka ijikwa Big Data. N'aka nke ọzọ, enwere ike ịkọwa ya na ọ na-enye teknụzụ na-anọchi anya arụmọrụ dị elu site na nkwado maka mgbanwe ịke maapụ, mmelite na nnọchite oge, ụlọ ọba akwụkwọ na-emepe emepe na teknụzụ ọhụụ ọhụụ gbasara ohere. (agbasasị eserese, thermogram, map okporo, ma ọ bụ map trajectory.
A na-eji ọrụ ndị ahụ e kwuru na mbụ iji meziwanye nghọta nke gburugburu ebe obibi, nke sụgharịrị n'ime mmepe na mkpebi mkpebi n'isiokwu ndị dị ka: Smart City, Ọrụ Ọha, Nhazi Obodo na Nchịkwa. Achọpụtara ihe ọmụmụ ahụ, ebe ha jiri SuperMap na teknụzụ ya mee ihe, otu n'ime ha nwere ike ịkọwa: Usoro nchịkwa obodo nke mpaghara Chogwen - Beijing, Ọnọdụ gbasara mbara igwe nke obodo dijitalụ dabere na igwe ojii. , Japan Ọdachi Geoportal, Sistemụ Ozi maka Japan Nnukwu-Scale Railway akụrụngwa Dabere na SuperMap, na Oké Drokọ amụma Platform.
Ọ bụrụ na anyị ewere otu n'ime ihe ndị dị n'elu, dịka ọmụmaatụ: Usoro ozi maka nnukwu ụgbọ okporo ígwè na Japan dabere na SuperMap, ekwesịrị ịkọwapụta na SuperMap Gis, na-achịkwa ụlọ ọrụ ụgbọ oloko niile na Japan, yabụ oke data bụ dị oke oke ma dị arọ, na mgbakwunye na ịchọrọ ikpo okwu nke na-ezute ogo na njikọta chọrọ.
SuperMap mebere ọrụ Internetntanetị na Intranet, gbakwunye usoro njikwa data na SuperMap Objects, nke na-ajụ ajụjụ gbasara ohere gbasara mbara igwe, mmelite ndekọ ọnụ ọgụgụ, mmelite gbasara ohere (ntinye akwụkwọ mmado na njirimara), ịdegharị map, nyocha nke nchekwa, imewe na ibi akwụkwọ; ihe a niile site na onye na - ekiri ihe ọmụma - nke e wuru na SuperMap-, naanị maka data sitere na ụlọ ọrụ a, nke ejiri nweta atụmanya nke otu JR East Japan nke na-ejikwa usoro ụgbọ okporo ígwè.
Ọ bụ na-akpali banyere nke a ngwọta, ala nke iji, a zuru dịgasị iche iche ngwaahịa akara, tụnyere ha na ngwaahịa, anụ arụmọrụ nke ya ọrụ ọma na-eji nwere ike ịbụ a ọma ọzọ n'ihi na ụlọ ọrụ lekwasịrị anya na-arụpụta. The ngwaahịa nyere na-abụghị nanị maka ọdịdị mbara ala ma ọ bụ geomatics, ma e mere ka ọchịchị na-azụ ahịa ozu, onye, ​​site n'iji ya, nwere ike ime ka o kwekọọ n'ihe ndị gbasara ohere eme mkpebi.
Previous Post«Previous Oge - Ntinye iji nweta ihe ngosi satịlaịtị na AutoCAD
Next Post Ihe ngosi 3D mobile laser scanning na-enweta mmeri ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị nweta akara ngosiNext »